တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာလေဆာမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက် > Fiber လေဆာသတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်
1. ထုတ်ကုန် Fiber လေဆာလေဆာမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၏နိဒါန်း
၁) အားကောင်းသောတိုတို၊ လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသည့်လေဆာရောင်ခြည်များသည်ပစ်မှတ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပလာစမာပြတ်တောက်ခြင်း၊
၃။ လေဆာရောင်ခြည်သန့်ရှင်းမှုသည်သတ္တုမျက်နှာပြင်များအတွက်သင့်တော်သည်။ အဆိုပါကုသနှင့် optimized လေဆာရောင်ခြည်သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သူတို့အားလေဆာရောင်ခြည်ကုသမျက်နှာပြင်များမထိခိုက်ပါဘူး။ တိကျစွာညှိထားသောလေဆာရောင်ခြည်သည်အပေါ်ယံလွှာ၊ ကျန်ရှိသောကျန်သို့မဟုတ်အောက်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သာသက်ရောက်ပြီးနောက်ခံမိဘသတ္တုမျက်နှာပြင်ကိုမထိခိုက်ပါ။
Fiber လေဆာလေဆာမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
တစ်ခုတည်းအဆင့်, 220V ± 10% ~ 50 / 60Hz AC
၃ ဂဂ / ဇ
4ã / h
၆ ဂရမ် / ဇ
၅ မီတာ (၁၀ မီတာကအလိုအလျောက်)
3. ထုတ်ကုန် Feature နှင့်ဖိုင်ဘာလေဆာသတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၏လျှောက်လွှာ
Fiber Laser သတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၏အားသာချက်
(၁) သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောဘက်စုံသုံးနိုင်သောသန့်ရှင်းရေးစက်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမြင့်မားသောသန့်ရှင်းရေး၊ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အခြားမျက်နှာပြင်ကုသမှုများလိုအပ်သောသေးငယ်သည့်ofရိယာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုသမှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
(၂) အခြေခံစနစ်တွင်လေဆာရောင်ခြည်နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အအေးပေးခြင်း၊ ရောင်ခြည်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် fiber optic နှင့် processing head တစ်ခုပါဝင်သည်။ ရိုးရှင်းသောအဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အလွန် နည်း၍ အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
(၃) အစိတ်အပိုင်းများကိုကုသရန်အခြားမီဒီယာမရှိပါ။ ဤလေဆာစနစ်များသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးလုံးဝမပြုပြင်နိုင်ပါ။
4. Fiber လေဆာရောင်ခြည်သတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၏နမူနာများ
အမျိုးမျိုးသောသံမဏိသံမဏိမှန်စာလုံးများ၊ သံမဏိတပ်ဆင်ထားသောစာလုံးများ၊ သံမဏိလုံးလုံး၊ သံမဏိဆေးသုတ်အက္ခရာများ၊ သံမဏိမှုတ်ဆေးအက္ခရာများ၊ သံမဏိအစိုင်အခဲအက္ခရာများ၊ သံမဏိလျှပ်စစ်သံပြားများ၊ titanium ပြားချပ်ချပ်အက္ခရာများ, တိုက်တေနီယမ်လုံးလုံးအက္ခရာများကြော်ငြာစကားလုံးများ၊ Seiko titanium gold fonts, ပြားချပ်ချပ်ကြေးနီဖောင့်များ၊ လုံး ၀ ကြေးနီဖောင့်များ၊ အနီရောင်ကြေးနီဖောင့်များ၊ နှင့်သတ္တုဖောင့်ဖွဲ့စည်းရန် welded နေကြသည်။ အလင်းရောင်နှင့်မှိုလုပ်ငန်း၊ optoelectronic ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းများ၊
5. ပို့ဆောင်ခြင်း, သင်္ဘောတင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု
ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ပိုလန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူကေ၊ အမေရိကစသည်တို့အပါအ ၀ င်ခရိုင်များရှိနှစ်စဉ်ရေခြားမြေခြားလေဆာစက်မှုလုပ်ငန်းပြပွဲများတွင် XT LASER တွင်ပါ ၀ င်သည်။ စက်၊ လေဆာအမှတ်အသားစက်၊ လေဆာဂဟေစက်နှင့်လေဆာသန့်ရှင်းရေးစက် ect ။
XTLASER ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်၏ထုပ်ပိုးမှုမှာပုလဲဝါဂွမ်းပါ ၀ င်ပြီးအလွှာသုံးလွှာပါ ၀ င်သည်။ အပြင်ဘက်ကိုလူမီနီယမ်သတ္တုပါးအင်္ကျီဖြင့်ပတ်ထားပြီးအောက်ခြေသည်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။
01: ဒီစက်အကြောင်းငါမသိဘူး၊ ငါ့အလုပ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရလား။
ဖြေ။ ။ ခင်ဗျားတို့ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုမင်းတို့ပေးမှာပါ။ မင်းရဲ့အလုပ်အပိုင်းဘယ်ဟာကိုရော၊ အညစ်အကြေးဘယ်သန့်စင်မယ်၊
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွှာ ၃ ခုပါရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားကိုယ်ထည်ကိုမီးမွှေး။ ကင်းစင်စေပါသည်။ အလယ်၌စက်ကိုလှုပ်ခါခြင်းမှကာကွယ်ရန်စက်ကိုအမြှုပ်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းအလွှာအတွက်စက်ကိုရေစိုခံပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေပေးချေမှုရရှိပြီးနောက်အချိန်ပိုသည် ၇ ရက်အတွင်းဖြစ်သည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် T / T နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
hot Tags:: Fiber Laser သတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ , အရည်အသွေး, ဖန်စီ